Nke a bụ ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ
Na August 2, ọ bụrụ na asịrị ndị anyị na-agụ ma na-ege ntị ruo ụbọchị ekwenyela, Samsung ga-eweta ya Galaxy Cheta 7 ọhụrụ, ụdị ọhụrụ nke phablet na-ewu ewu sitere na ụlọ ọrụ South Korea. Kemgbe ụbọchị anyị na-amụ akụkọ banyere ọnụ ọhụụ ọhụrụ a, na taa, mgbe a ka nwere ihe karịrị otu ọnwa maka ngosipụta gọọmentị, anyị amatala ọtụtụ ozi gbasara Galaxy Note ọhụrụ a.
Anyị nwere ike ịsị na anyị ga-ahụ ihe ịtụnanya ole na ole na mmemme ahụ, belụsọ na Samsung kpebiri idebe aka ya, nke anaghị emekarị. Ya mere, na ị pụrụ zuru asian, taa anyị na-aga na-enye ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ.
1 Aha; Galaxy Note 7. Ebee ka anyị si hapụ 6 Galaxy Note?
2 Ihuenyo gbagọrọ agbagọ, na-enweghị aha aha ikpeazụ
3 Iris nyocha
4 Atụmatụ na nkọwa
5 Batrị ọzọ ga-enye anyị nnwere onwe ka ukwuu
6 Nguzogide kasịnụ
Aha; Galaxy Note 7. Ebee ka anyị si hapụ 6 Galaxy Note?
Izu ole na ole gara aga, ọtụtụ ntapu na Samsung n'onwe ya, site na ụfọdụ ndị na-ekwuchitere onwe ya, gosipụtara nke ahụ A ga-eme Galaxy Note 7 ọzọ Galaxy Note, na-ahapụ Galaxy Note 6 n'ụzọ..
Nkọwa ya dị mfe ma dịkwa mfe nghọta. Ọ bụrụ na ọzọ August 2 Samsung ọkọnọ a Galaxy Cheta 6, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike na-eche na anyị na-eche ihu a ọnụ "azụ", ebe ọ bụ na ihe atụ na Galaxy S6 ma ọ bụ iPhone 6 na-ama ochie. Unchkwalite Galaxy Note 7 ozugbo, pụtara imelite, na itinye ezinụlọ Cheta na ọkwa nke ngwaọrụ ndị dị ugbu a n'ahịa, ọbụlagodi aha ya.
Ewezuga nnukwu na nnukwu ihe ijuanya, Samsung Galaxy Note 7 ga-abụ akara ngosi nke Samsung ọzọ, na-ahapụ ihe echefuru Galaxy Note 6 na n'ụzọ.
Ihuenyo gbagọrọ agbagọ, na-enweghị aha aha ikpeazụ
Ihe malitere dị ka nnwale na oghere 4 Galaxy Note, wee bụrụ ihe ịga nke ọma na Samsung Galaxy S6 ihu. Na Galaxy S7 onu Ọ na-ere ihe karịrị ụdị nkịtị nke ọkọlọtọ ụlọ ọrụ South Korea na dịka ọtụtụ ntanye nzọ ahụ ọhụrụ Galaxy Cheta 7 ga-abụ naanị maka a curved ihuenyo.
Naanị ụnyaahụ, e nwekwara ọtụtụ nkwụsị nke smartphone ọhụrụ a na ụfọdụ n'ime mkpuchi ya, ebe anyị nwere ike ịhụ ma gosipụta ihu ihuenyo nke Galaxy Note 7, ọ bụ ezie na ọ dị ka anyị ga-ahụ otu ihu aha ikpeazụ ga-apụ n'anya. Banyere ogo nke ihuenyo a, anyị nwere ike ịhụ etu nọrọ na 5,7 sentimita asatọ ma ọ bụ ọbụlagodi ka ọ na-eto na 5,8.
Ihuenyo nwere ike ịnwe mpaghara enyere iji jiri S-Pen mee ihe kachasị mma nke ngwaọrụ nke Galaxy Note. Nke a bụ otu n'ime nkọwa ole na ole anyị ga-akwado na August 2 na mmemme ngosi.
Otu n'ime ihe ọhụụ ndị ga - ewetara Galaxy Note 7 bụ ya iris nyocha, nke ugbu a anyị enwebeghị ike ịhụ na ngwaọrụ Samsung ọ bụla ma ọ bụ na njedebe ọzọ nke otu ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ South Korea ga-abụ onye mbụ ga-anwa anwa itinye teknụzụ a n'ime ihe akpọrọ ama ama ama.
Mkpisiaka sensọ na-ama nkịtị na ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa, ihe ọ bụla ha nso, ma ihe iris nyocha na-aga otu nzọụkwụ n'ihu. Kpọghe ngwaọrụ ahụ na anya anyị ma ọ bụ nwee ike ịnye ikike ịzụrụ ihe ga-abụ ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị nwere ike ime na ihe mmetụta a nke Galaxy Note 7.
Iji mara ozi niile gbasara njirimara ndị a na-adọrọ mmasị nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea, anyị ga-echere ruo mgbe anyị ga-etinye aka anyị na Note 7 ọhụrụ iji nwee ike ịpịa ya wee nwalee ya ruo oke ike ọgwụgwụ.
Super Amoled ihuenyo nwere 5,7-inch nke QHD mkpebi, ọ bụ ezie na ọ bụghị achịghị na anyị nwere ike gbagoro 5,8 sentimita asatọ
Qualcomm Snapdragon 821 ma ọ bụ Exynos 8893 processor
Nchekwa dị n'ime nke 64, 128 na ihe ruru 256 GB. N'ọnọdụ niile anyị nwere ike ịgbasa nchekwa a site na iji kaadi microSD
Igwefoto na-agba ọsọ na ihe mmetụta 12 megapixel nke anyị na-amaghị ọtụtụ nkọwa n'oge a, n'agbanyeghị na ihe niile na-egosi na ọ nwere ike ịdị ka Galaxy S7
Gam akporo 6.0.1 sistemụ arụmọrụ nke nwere usoro nhazi nke TouchWiz ọhụrụ
Batrị ọzọ ga-enye anyị nnwere onwe ka ukwuu
Banyere batrị asịrị na-arụtụ aka n’ebe dị iche iche ma ọ bụ na ụfọdụ na-ekwu na batrị ahụ nwere ike ịnọ na 3.600 mAh, ebe ndị ọzọ na-ekwu na ọ ga-eru 4.000 mAh. N’iburu n’uche na 5 Galaxy Note nyere anyị batrị na 3.000 mAh ihe ịrụ ụka adịghị ya ọhụrụ Samsung Galaxy dee 7 ga-enye anyị ọzọ batrị na na a ukwuu obodo kwụụrụ.
Ọzọkwa, dị ka asịrị, ihe ngosi ọhụrụ 7 ga - enwe ike inye anyị nnwere onwe nke ihe ruru awa iri abụọ nke vidiyo vidiyo, yana ncha ihu ihuenyo kachasị. Nke a enweghị obi abụọ, ọ bụrụ na enen, ga-abụ ihe pụrụ iche na ọ bụ na ọ ga-enye anyị ọrụ na o siri ike ọ bụla ọzọ yiri ngwaọrụ nwere ike dakọtara.
Ọ bụrụ na atụmanya kachasị njọ, nke ahụ bụ ịsị na Samsung ọhụụ nwere 3.600 mAh batrịDị ka Galaxy S7, ọ gaghị abụkwa akụkọ ọjọọ, dịka a katọrọ ama a maka akụkụ ụfọdụ, mana ọ bụghị maka batrị ya yana obodo kwụụrụ ya.
Ọ bụghị na ndị gara aga anaghị eguzogide ọgwụ, mụ onwe m ka nwere Galaxy Cheta nke lanarịrị ọtụtụ ọdịda na ọtụtụ ihe omume dị iche iche, mana dịka Evan Blass a ma ama nke a, Galaxy Note 7 ga-abụ ihe na-eguzogide ọgwụ karịa ndị bu ya ụzọ.
Ma ọ bụ ya ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea ga-enwe akwụkwọ ikikere IP68 nke na-eme ka ọ ghara ịchọta mmiri ma ọ na-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, iji mikpuo ngwaọrụ ahụ ma ọ dịkarịa ala minit 30. Nke a bụ otu asambodo nke ndị òtù Galaxy S7 nwere.
Ì chere na Samsung ga-edebe ihe ịtụnanya ọ bụla maka ngosi nke ọhụụ ọhụụ nke Galaxy Note 7 na, dị ka anyị kwurula, ga-eme na August 2?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nke a bụ ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ
Site na Apple Apple achịcha na gam akporo Nougat, nyocha nke akụkọ ihe mere eme nke ụmụ bebi gam akporo
Samsung Galaxy Tab A rutere Spain na ụzọ ọrụ